Posted on March 19, 2010 by UYFM
थारु जातिमा प्रचलित थरहरु :
चौधरी सरदार मण्डल खाँ तबदार
कठरिया भगत विश्वास लम्पुछिया पन्जियार
लालपुरिया कनफट्टा माझी थानदार सिंह
बछार कडरिया थारू धामी रौतार
राय महन्त सोलरिया दहित सुतियार
कानगोई बाँतर महतो डंगौरा जोगी
गच्छेदार खवास लेखी सुनाहा राना
नेपालका थारु जातिहरु यस्ता जाती हुन् जो मधेसका हरेक जिल्ला र पहाडी जिल्ला ( सुर्खेत) सम्म बसोबास गर्दछन ! चुरे क्षेत्रका उपत्यकाहरु दांग र माडी तथा उदयपुरको उपत्यका क्षेत्रका पुराना बासिन्दा मध्ये एक हुन् ! सन् २००१ को जनगणनामा करिब पन्ध्र लाख भन्दा बढी थारुहरु भएको उल्लेख पाइन्छ !
सामाजिक स्तरीकरण र बनावट–
थारु समाज भित्र आफ्नै किसिमको स्तरीकरण रहेको छ ! थारुहरुको सामाजिक बनावट को अध्यन गर्न थारु समुदाय को सम्पूर्ण अध्यन पुरा हुन्छ ! ति हुन् – मोरंगिया ( कोशिपुर्व का थारुहरु ), कोशीदेखि पर्साका कोचिला / तिरहुतिया थारु, चितवनदेखि कपिलवस्तु सम्मका थारु र पश्चिममा थारु (दांग वा सोभन्दा पश्चिमका) ! तर हामीकहाँ पश्चिममा थारु र केही मात्रामा खोशी पुर्व का थारुको अध्यन गरेर सम्पूर्ण थारु जाती लाई चिन्ने गल्ती हुदै आएको छ !
धामी-झाक्री र भूतप्रेत:
हरेकको घरमा कुलदेवता राख्ने चलन छ ! पूर्वतर्फ गोसाइघर भनिन्छ ! प्राय: गोसाइघरमा सुँगुर लाने चलन छैन ! त्यस्तै गाउँ पिच्छे ग्रामदेवता रहेको हुन्छ जसलाई बरमथान पनि भन्ने गरिन्छ ! पश्चिमतिर भयाँरथान पनि भन्ने गर्दछन ! यस्ता ग्रामथानमा गर्नेलाई पश्चिममा गरवा वा कसै-कसैले गुरुवा पनि भने गर्दछन ! पूर्वतिर ग्रामधामी भन्ने चलन छ ! सप्तरीतिर जैथरैत पनि भनिन्छ ! यिनीहरुले तन्त्र मन्त्र जानेका हुन्छन ! थारुहरुमा यस्ता पुजारीहरु जन्मजात हुने चलन छैन ! जसले तन्त्रमन्त्र र पुजापाठ गराउन सक्छन तिनीहरु धामी हुने चलन छ ! कुलदेवता र ग्रामदेवता लाई विभिन्न समय र उत्सव हरुमा पुजा गर्ने र सुँगुर, पाठापाठी, परेवा, हाँस आदिको बलि दिने चलन छ ! तर शिक्षित र सम्पन थारुहरुमा सुंगुरको बलि दिने प्रथा छैन ! कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिले यी देवताहरुको पुजा अनिवार्य मानिन्छ ! थारुहरुमा धामी र गरवाको उच्च स्थान रहदै आएको देख्न सकिन्छ ! नवलपरासी-कपिलवस्तुतिर धामीलाई ओझा वा सोखा भन्ने गरिन्छ ! त्यस्तै बोक्सीलाई टोनाहिन भनिन्छ !
« Sample Copy of UYFM membership Form मधेसमा भएका दलित जातिका परम्परागत पेसा र तिनीहरुको प्रचलित थरहरु »